Gịnị bụ Criminology | Nhazi na ọmụmụ ihe
Maria José Roldan | 14/01/2022 12:19 | Ọzụzụ
Ọ bụrụ na omume mmadụ na-amasị gị mgbe niile ma ọ bụ ihe kpatara eji eme ụfọdụ mpụ na mmebi iwu. Obi abụọ adịghị ya na ọrụ Criminology bụ nke kacha mma maka gị. Isiokwu a na-atọ ụtọ n'ezie na ọ ga-enye gị usoro mmụta nke ị nwere ike ịtụgharị n'ọrụ.
N'isiokwu na-esonụ, anyị ga-agwa gị ọtụtụ ihe gbasara ọrụ Crimonology na nke ohere ọrụ dị iche iche ọ na-enye.
1 ọrụ mpụ
2 Kedu àgwà onye na-amụ mpụ kwesịrị inwe?
3 Otu esi enweta ọrụ mpụ
4 Ohere ọrụ nke ọrụ Criminology
5 Otu esi amata ma Criminology bụ ezigbo ọrụ
Mpụ bụ ịdọ aka ná ntị nke ga-enyocha nke ọma onye mejọrọ na omume mpụ ya, iji chọpụta ihe kpatara onye ahụ ji mee ụdị omume iwu na-akwadoghị. Criminology bụ ihe dị mkpa na isi maka ọha mmadụ, ebe ọ bụ na ebumnobi ya bụ ibelata mpụ na inwe ike ibi na ya n'okpuru ụkpụrụ obodo na ụkpụrụ ndị nwere ike ime.
Ọtụtụ mgbe, ịdọ aka ná ntị nke mpụ na-enwekarị mgbagwoju anya na nke ndị omempụ.. Onye ọ bụla nwere njirimara nke ya na ọ bụ ezie na mpụ na-ahụ maka nkà mmụta sayensị na-ahụ maka mpụ, mpụ na-elekwasị anya n'akụkụ uche na mmekọrịta ọha na eze nke mpụ. Criminology na-agbalị ịghọta echiche ndị omempụ oge niile yana ka ọ gaara esi malite. Ewezuga nke a, ọ na-enyochakwa mmetụta ọ na-enwe na ọha mmadụ.
Kedu àgwà onye na-amụ mpụ kwesịrị inwe?
Ọrụ nke mpụ dakọtara kpamkpam na nke Iwu, yabụ a na-atụ anya na onye kpebiri ịhọrọ ụdị ọrụ ahụ nwere mmasị zuru oke na ụkpụrụ omume na ikpe ziri ezi. Ewezuga nke a, onye ahụ a na-ajụ ga-enwerịrị ikike ọ ga-enwe ike ịkọwa ebe ọ bụ na n'ụzọ dị otu a ọ ga-adị mfe ịghọta ụfọdụ omume na-ekwesịghị ekwesị. Ịmara ka esi ewepụ ihe na ime mkpebi dị iche iche dabere na eziokwu. Ọ bụ àgwà ọzọ onye kpebiri ịmụ mpụ kwesịrị inwe.
Otu esi enweta ọrụ mpụ
Ọ bụrụ na mmadụ ahọrọ ụdị ọrụ mahadum a, ọ ga-ezuru ịnweta nzere bachelọ ma ọ bụ nwee ogo FP dị elu iji debanye aha na ya. Ugo mmụta mpụ dị afọ anọ na n'ime ya, a na-amụ isiokwu ndị metụtara psychiatry ndị omempụ, ụzọ sayensị ma ọ bụ ikike mmadụ na ụkpụrụ.
Ohere ọrụ nke ọrụ Criminology
Ugbu a, ọrụ Criminology na-enye onye na-eme ya ohere ịnweta ọrụ na-enweghị ọtụtụ nsogbu. Ọtụtụ, Ndị omekome na-arụkarị ọrụ na ikpe ziri ezi ma ọ bụ ụlọ ọrụ nchekwa dịka ụlọ mkpọrọ. N'ime ha ha na-arụkarị ọrụ dị iche iche dị ka imekọ ihe ọnụ na ụfọdụ nyocha mpụ ma ọ bụ ime ụfọdụ ọmụmụ banyere mpụ.
N'okwu ndị ọzọ, ha na ndị ọkachamara na-ahụ maka mpụ na-arụkọ ọrụ ọnụ iji dozie ụfọdụ nyocha mpụ. Ha nwekwara ike họrọ ijere ndị mpụ dị iche iche ozi na nyere ha aka niile kwere omume.
Otu esi amata ma Criminology bụ ezigbo ọrụ
Ọ nwere ike ịbụ ezigbo ọrụ ma ọ bụrụ na-amasị gị ihe niile metụtara mpụ na mpụ. O zuru oke maka gị, ọ na-atọ gị ụtọ inyocha ihe na-eduga mmadụ ime ihe na-ezighi ezi. Ewezuga nke a, otu isi ihe na-akwado ọrụ Criminology bụ n'ihi na ọ nwere ezigbo ohere ọrụ.
Cheta na ọ bụ ịdọ aka ná ntị nke nwere ọrụ dị oke mkpa n'ime ọha mmadụ, ebe ọ bụ na ekele ya na-egbochi ọtụtụ mpụ na ndị a tara ahụhụ. Onye na-ahụ maka mpụ na-ahụ maka ịmụ ụdị onye omempụ ahụ na imepụta ọmụmụ ihe dị iche iche na-enyere aka ịtinye onye omekome ahụ e kwuru n'elu n'ime ọha mmadụ.
Na nkenke, Ọrụ Criminology bụ otu n'ime ihe na-atọ ụtọ na panorama agụmakwụkwọ niile. Ọrụ ọ na-arụ na ọha mmadụ dị ezigbo mkpa na nke a na-eme ka ọ mara mma karịa ọtụtụ mmadụ. Ọ bụ ezigbo ịdọ aka ná ntị maka ndị ahụ nwere mmasị dị ukwuu n'otú omume mmadụ si eme, karịsịa mgbe ha na-eme ihe ọjọọ ma ọ bụ mpụ.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Nhazi na ọmụmụ ihe » Noticias » Ọzụzụ » Kedu ihe bụ Criminology?
Gbochie ọdịda ụlọ akwụkwọ n'ụlọ